ध्यान राख्नुस ! कलेज, मिर्गौंला, मधुमेहको संक्रमणले मुखमा दुर्गन्ध आउँन सक्छ | Samacharpati ध्यान राख्नुस ! कलेज, मिर्गौंला, मधुमेहको संक्रमणले मुखमा दुर्गन्ध आउँन सक्छ – Samacharpati
ध्यान राख्नुस ! कलेज, मिर्गौंला, मधुमेहको संक्रमणले मुखमा दुर्गन्ध आउँन सक्छ
काठमान्डाैँ, ८ वैशाख । दाँत ब्रस नगरेको अवस्थामा खानेकुरा मुखभित्र सड्न थाल्छ, जो दुर्गन्धको कारण बन्छ । त्यसैले खाना खाएपछि ब्रस गर्नुपर्छ । तर, मुख सफा गरेको अवस्थामा पनि दुर्गन्ध आउँछ भने अरु थुप्रै कारण हुनसक्छ ।